बलात्कारको शिकार हुन लागेकी महिलाले लगाइन् स्मार्ट ‘आइडिया’, तर्सिएर भाग्यो बलात्कारी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बलात्कारको शिकार हुन लागेकी महिलाले लगाइन् स्मार्ट ‘आइडिया’, तर्सिएर भाग्यो बलात्कारी
काठमाडौं। हाम्रो समाजमा बलात्कारका घटनाहरु भइरहेका छन् । विभिन्न ठाउँमा हुने यस्ता घटना रोक्नका लागि विभिन्न प्रयासहरु पनि भइरहेका छन् । पछिल्लो समय एक महिलासँग भएको बलात्कारको प्रयासको घटना निकै चर्चामा छ । घटना भारतको महाराष्ट्रको हो । यहाँ एक महिलाले बलात्कारीबाट बच्नको लागि यस्तो स्मार्ट आइडिया लगाइन् कि यो विषय अहिले चर्चामा छ । २९ वर्षकी ती महिला विधवा हुन् ।
महाराष्ट्रको औरंगाबादमा ती महिलालाई एक युवकले बलात्कारको प्रयास गरेका थिए । २२ वर्षका किशोर विलास अवहद नामका ती युवकलाई पक्राउ गरिएको छ । २५ मार्चका दिन बेलुका ती महिला आफ्नी ७ वर्षकी छोरीलाई साथमा लिएर एक पसलमा सामान किन्न गएकी थिइन् । घर फर्कने बेला उनीसँग १० रुपैयाँ मात्र बाँकी रह्यो । उनले अरु यात्रुसँग मिलेर अटोमा घर फर्कने प्रयास गरिन् तर ‘शेयरिङ अटो’ पाउन सकिनन् ।
त्यसपछि महिलाले छोरीसँग बाटोछेउमा उभिएर लिफ्ट माग्ने प्रयास गरिन् । त्यही समयमा त्यही बाटोमा मोटरसाइकलमा जाँदै गरेका किशोरले उनलाई लिफ्ट दिए । किशोरले उनीहरुलाई घर नलगी सुनसान ठाउँमा लिएर गए । त्यहाँ उनले धारिलो हतियार देखाएर महिलालाई बलात्कारको प्रयास गरे । महिलाले उनीबाट बच्नको लागि आफू एचआइभी संक्रमित भएको बताइन् । उनको कुरा सुन्नासाथ किशोर उनीहरुलाई त्यहीँ छोडेर भागे । त्यसपछि महिलाले पुलिसमा खबर गरिन् । महिलाले बताएको हुलियाका आधारमा आरोपीको स्केच तयार गरेर पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।